ဤဂိမ်းများတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။ ကျွန်တော်သိတာကထရပ်ကားမောင်းသူတွေဟာအခုပြီးတော့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေကစားတာကိုနှစ်သက်ပေမဲ့မှတ်တိုင်အားလုံးကတော့အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့မဟုတ်အချို့သောအခြားယောက်ျားတွေအမြဲရှိလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းရှိခြင်းပျော်မွေ့. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသင့်ကွန်ပျူတာမှာကစားနေတဲ့ဓာတ်မှန်ဂိမ်းတွေကသင့်ကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုတွေပေးပါလိမ့်မယ်။ ဂရပ်ဖစ်တွေကပိုကောင်းတယ်၊လှုပ်ရှားမှုကပိုကောင်းတယ်၊အသံကတောင်အထိမခံတဲ့ထိရှိတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့နှစ်ခုသတင်းကောင်းရှိသည်. သူတို့ထဲမှတစ်ဦးမှတပါးသင်တို့ရှိသမျှသည်ဤဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြောင်း,ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ကိုဝဘ်ပေါ်သူတို့ကိုကစားခြင်း၏အခွင့်အလမ်းပေး. ဒုတိယသတင်းကောင်းကကျွန်တော်တို့စုဆောင်းမှုထဲကအခမဲ့လူကြီးဂိမ်းတွေအားလုံးကိုအခမဲ့ရယူနိုင်တာပါ။
အကယ်၍သင်သည်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ဖန်တီးခြင်းကိုနှစ်သက်ပါကဤဝက်ဆိုဒ်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ အခြားဆိုဒ်များသင်ဇာတ်ကောင်များ၏ကြည့်ရှုကျော်ထိန်းချုပ်ရှိသည်မခံပါနဲ့. သင်သည်သင်၏အိပ်မက်များ၏လူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူငယ်ယောက်ျားသည်ဤအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမြင်အာရုံဝတ္ထုဂိမ်းအပေါ်သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်ပါစေနိုင်သည်.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ,သင်ခံစားနိုင်အမျိုးအစားနှင့်လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်ကစာရေးလည်းရှိပါတယ်. စွန့်စားခန်းနဲ့ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေမှာလူကြိုက်အများဆုံးမျိုးတွေရှိတယ်။ မီရှယ်လ်သည်သူ၏မြည်းကြီးကိုဒစ်ကင်းပေါ်သို့ရွှေ့လျားနေခြင်းကိုကျွန်တော်မစောင့်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်.အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာငါတို့သည်သင်တို့၌ရှိရှိသမျှစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများကိုပူဇော်ကြောင်း. အကယ်၍သင်သည်မိခင်ချစ်သူများအသင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါကသို့မဟုတ်သင်ဖေဖေသမီးစိတ်ကူးယဉ်မှုများသို့ရောက်နေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မိသားစုလိင်ဆိုင်ရာဂိမ်းများကိုသင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာမချုပ်တည်းထားတဲ့အားကစားပွဲတွေထဲကအမေတွေ၊
အဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုထူးခြားတဲ့စေသည်ကျွန်တော်သာထော့5 ဂိမ်းများဖြစ်ပါတယ်,အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားလောကီသားတို့သည်ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုနေသော. သင်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်မည်မဟုတ်ခြေဆွံ့သောသူကိုဂိမ်းများမီး. ဤရွေ့ကားအရွယ်ရောက်ဂိမ်းများကိုသင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
သင်လိုင်းပြင်ရောက်နေချိန်၌ပင်ဂိမ်းများကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည်။ သို့သော်ထန္တ5 အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်.အကောင်းဆုံးအရာဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ပါသည်. အရာအားလုံးသည်ဤဂိမ်းအတွက်တုန်လှုပ်စေသောကြည့်,နှင့်သင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အရေအတွက်နှင့်ဂိမ်း၏ရှုပ်ထွေးမှုအားဖြင့်လွင့်လိမ့်မည်. ဒါဟာကြောက်စိတ်မိန်းကလေးရုပ်ပြစွန့်စားမှုအစစ်အမှန်အသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်နေသည်နှင့်တူရဲ့. တချို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအရာအားလုံးလူတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်နှင့်တူခံစားချစ်ကြတယ်. စိတ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့တူလုနီးပါ။
ဤဆိုဒ်သည်ဝက်(ဘ်)ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလူကြီးဂိမ်းများအားလုံးကိုနေ့စဉ်မွမ်းမံမှုများဖြင့်လာနေပြီး၎င်းတို့အားလုံးကိုအခမဲ့ပေးနေပါသည်။ ကျွန်မတို့မရူးသွားဘူး၊ရှင်တို့ကိုပြစရာလည်းမကြိုးစားဘူး။ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်မတို့ဆိုက်ထဲကငွေရှာဖို့လိမ္မာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာလူသိအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ဝက်ဘ်ပေါ်ကအကောင်းဆုံးလူကြီးမင်းကွန်ရက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားအလာကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံပါတယ်။ သူတို့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုက်မှာကြော်ငြာမှာမဟုတ်ဘူး၊ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းတာကပြီးပြည့်စုံမှုမရှိတာဆိုရင်ပေါ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်အခြားပလက်ဖောင်းများသို့အသွားအလာကိုဘယ်တော့မှမပို့ပါနှင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများကိုမသိမ်းဆည်းရန်အလေးအနက်အာရုံစိုက်ပါသည်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်၍အရိပ်အယောင်မျှမရှိပါ။
အားလုံးခြုံပြောရရင်ဒီမှာလုံးဝပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်နိုင်တာကလိင်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုယုံကြည်လို့ပါ။ ဒါကကျွန်မတို့ဝက်ဆိုက်မှာပွင့်လင်းတဲ့လက်လှမ်းမီတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်တွေပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်,ဒီဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှဂိမ်းများနှင့်မျိုးနှင့်ပတ်သက်.အပူဆွေးနွေးမှုများသို့ရယူနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤအစုအဝေးအတွက်ရှိသည်အရာအားလုံးကိုကစား. သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုရန်ဖိတ်ခေါ်ဖူး! ပုံမှန်ဂျိုး၊ဟောရီစတိဗ်နဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ဒေလီတို့ဟာသူတို့ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးစိတ်ကူးတွေကိုပိုပြီးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့နှစ်သက်လာကြတယ်။